eNasha.com - प्रशान्त, लोकप्रियता र आलोचना
प्रशान्त, लोकप्रियता र आलोचना
धेरैपछि मैले गुगल गुरु (गुगलडटकम) लाई सोधेँ- "गुरु इनशाडटकम वेबसाइटको लोकप्रियता कस्तो छ, बताइदिनु पर्‍यो !" मानौँ जादुइ जिन हो गुगल, केही सेकेण्डभित्रै उसले इनशाडटकमको लोकप्रियतालाई चित्रयुक्त ग्राफमा देखाइदियो । त्यो ग्राफमा खुशी हुनुपर्ने कारण दुइ वटा थिए, पहिलो- पछिल्लो समयमा यो वेबसाइटले आश्चर्यलाग्दो पाठक बटुलिसकेको रहेछ, दोस्रो- नेपालभित्र पनि यो नजानिदो तरिकाले 'सल्किसकेछ' ।
उसो भए, प्रशान्तसँग इनशाटकमको लोकप्रियताको के साइनो ? साइनो छ, त्यसैले त यत्रो भूमिका बाँधिरहेको छु । साइनो के छ भने, यो लोकप्रियता बढाउन भूमिका खेल्ने मुख्य तीन कारणमध्ये एउटा चाहिँ प्रशान्त तामाङ नै हुन् । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी पढिएका व्यक्ति वा लेख उनीबारे नै छ । यसले प्रशान्त तामाङ पछिल्लो समयमा नेपालमा अचम्मका 'जन्तु' बनेर उदाएको प्रष्टिन्छ । हुन पनि प्रशान्त 'भाग्यको छोरा' प्रमाणित भएका छन् । उनले नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली व्यक्तित्व सोनिया गान्धीसँग भेट्ने अवसर पाए । यस्तो अवसर बिरलै व्यक्तिले पाउँछन् । उनीसँग एउटा इतिहास जोडियो- नेपालमा राजालाई पदच्यूत गरिएको ऐतिहासिक घडीमा राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख दुवै रहेका गिरिजाबाबुसँग भेट्ने अवसर पाएका छन् । एउटा बेग्लै राष्ट्रको साधारण व्यक्तिलाई यस्तो अवसर जुर्नु, सानोतिनो कुरा होइन ।
त्यसो त गिरिजाबाबुले 'भारतका शान' प्रशान्तलाई दिएको महत्वलाई केही मधेसी मित्रहरुलाई ज्यादै चर्को तरकारी महसूस भएको छ । यसको प्रष्ट झल्को २७ असोजको नेपाल साप्ताहिकमा वरिष्ठ पत्रकार रामरिझन यादवको लेख 'प्रशान्त-क्रेजले उब्जाएको प्रश्न' ले दिन्छ । उहाँको भनाइ छ- नेपाली राष्ट्रवादको गलत व्याख्याको चरम उदाहरण प्रशान्त हुन् । पहडिया मात्र नेपाली र धोती-कुर्ता चाहिँ भारतीय भन्ने पञ्चायती दुश्प्रचारको परिणाम यही हो । उहाँले उठाउनु भएको कुरा सत्य हो, प्रशान्त तामाङ इण्डियन आइडोल बनेपछि नेपालमा पर्ने आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रभाव अहिले होइन, अबका केही दशकमा मात्र देखिन्छन् । तर एउटा कुरा सत्य के हो भने, प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई हामीले आफ्नो बनाउन कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नु हुन्न । हिजो राजा महेन्द्रले दार्जिलिङका अम्बर गुरुङहरुलाई लोभ्याएर नै हो, आजको नेपाली सङ्गीत समृद्ध छ । अनि, भारतले उदितनारायण झालाई लोभ्याएर नै हो, सयौँ सुपरहिट सिनेमा निर्माण भएका छन् ।
विद्वानहरु भन्छन्- राष्ट्रियता दुइ किसिमका हुन्छन् । एउटा सांस्कृतिक राष्ट्रियता र अर्को चाहिँ राज्यीय राष्ट्रियता । नेपालमा प्रशान्त-क्रेजलाई हामीले सांस्कृतिक राष्ट्रियताको दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा सुनीता विलियम्स र कल्पना चावलाको लोकप्रियता भारतीय नागरिक भएका कारणले बढेको होइन । ती दुवै अमेरिकी नागरिक थिए, तर तिनको जड भारत थियो । त्यसैले ती दुवै भारतमा लोकप्रिय रहे । त्यसो त 'जडको खोजी' का लागि बलिउडले राम्रैसँग लगानी गरेको थियो, सन् ९० को दशकको मध्यमा । 'दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाऐँगे' र 'परदेश'को सफलताको उच्चतम् विन्दु नै हो 'स्वदेश'को मोहन भार्गवको नासाबाट पलायन हुने निर्णय।
यो भनिरहनु पर्दैन- नेपालमा त्यही कुराको सिको हुन्छ, जुन भारतीय मिडियाले सबैभन्दा बढी लोकप्रिय बनाउँछन् । 'कसौटी जिन्दगी की'का एउटा पात्र मर्दा मात्र नेपाली नारीहरुले खानपिन छोडेको चर्चा त्यति पुरानो भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रशान्त त्यसको एउटा मात्र कडी हुन् । अर्को चाहिँ उनी नेपालमा सर्वप्रिय हुनुमा सांस्कृतिक राष्ट्रियताको नाताले पनि काम गरेको हुनुपर्छ ।
सांस्कृतिक राष्ट्रियताको अर्को नमूना गएको वर्षबेलायतमा बमकाण्डलाई लिन सकिन्छ । उक्त बमकाण्डका कारण बेलायती सरकार मात्र होइन, संसार चकित बनेको थियो । कारण के थियो भने त्यस बमकाण्डमा बेलायती नागरिकहरुको नै भूमिका थियो । बमकाण्डमा संलग्न व्यक्तिहरुको खोजी गर्दा पछि पत्ता लाग्यो, त्यो काण्डमा पाकिस्तानी मूलका इस्लामहरुको हात थियो । किन बेलायती नागरिक भइकन आफ्नै देशमा बम प्रहार गरे त ? विद्वानहरु भन्छन्, यो सांस्कृतिक राष्ट्रियता नै थियो, जसका कारण त्यो बमकाण्ड घट्न पुग्यो । सांस्कृतिक राष्ट्रियताको अर्को सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इजरायलको स्थापनालाई लिन सकिन्छ । यदि सांस्कृतिक राष्ट्रियता नभएको भए इजरायल राष्ट्र बन्ने थिएन । सांस्कृतिक राष्ट्रियताका फाइदा बेफाइदा आफ्नै किसिमका छन्, प्रशान्तलाई भने सांस्कृतिक राष्ट्रियताको फाइदा मिलेको भने पक्कै हो । त्यस्तै उदितनारायण यदि मैथिल नभएका भए उनले बम्बईमा सफलता पाउन गाह्रै थियो ।
सांस्कृतिक राष्ट्रियतालाई भारतले राम्रैसँग उपयोग गरेको छ, धनाढ्य एनआरएनहरुलाई भारतमा आउन लोभ्याएर । हामीमध्ये धेरै भारतको सिको गर्र्छौँ । सरकारले पनि यही उपाय अपनाए के होला ?
कीर्तिमान सेलेब्रिटी माओवादी संविधानसभा हल्ला मोबाईल awards hi-life streets पेट्रोल crisis अनुभव समलिङगी celebrity festival events